प्रकाशित मिती: July 19, 2017 | nayakhoj24 admin पढ्न:0मिनेट
महिनावारी हुँदा किन ढाड, पेट कम्मर दुख्छ ? दुखाई कम गर्न यसो गर्नुहोस
ढाड के कारणले दुख्छ ? ढाड दुख्ने समस्याबाट बच्न यसो गर्नुहोस
दुब्लो पातलो भएर तनाबमा हुनुहुन्छ ? केहि दिनमै तौल बढाउन यसो गर्नुहोस
छाला चाउरी परेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? चाउरी पर्नबाट बच्न यसो गर्नुहोस
दाँतमा फोहोर जमेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? पहेंलो दाँत चम्काउन यसो गर्नुहोस
तपाईको शरीरमा डाक्टरले के गर्दैछन ? किन गर्दैछन ? अस्पताल बाट डाक्टरको लाइभ भिडियो हेर्नुहोस